FXPRIMUS waxay ogtahay in ganacsatadeedu ay u baahan yihiin gelitaan degdeg ah akoonadooda ganacsi, goob kasta oo ay ka joogan caalamka, iyo wakhti kasta oo maalinta ah. Sidaas awgeed, waxaan bixinaa barnaamijyada ugu waxqabadka fiican, uguna awooda badan haday website tahay, tablet ama mobile. Baadh boggayaga iyo adeegyadeena kala duwan, oo isla markiiba ku soo degso aaladda aad dooratay.
Muxuu gaar la yahay ee la xiriira VPS?
Isticmaalka Adeegga VPS wuxuu sii wanaajinayaa khibradahaaga ganacsi ee MT4 isagoo ku siinaya wakhti fiican oo kusoo jawaab celiyo oo udhaxeeya akoonkaaga MT4 iyo servers-kayaga. Tani waxay kordhineysaa fursadahaaga aad ku buuxiso qiimaha ugu wanaagsan iyo fursadda aad lacag kaga sameysan karto trade kuu gaar ah. Si aad shayyada uga dhigto kuwo xiiso gaar ah leh, waxaad ka fiirin kartaa dhamaan xaaladaha VPS-ka la diwaangaliyay intii lagu gudo jiray Non-Farm-Payrolls, waxaana lagu soo bandhigaa sawir ahaan!
Waxay ku shaqeeyaan server-da ugu qaalisan
Waxayna adeegsadaan awooda shabakado dhawr ah
Ma leh hal bar oo cilad hardware ah sidaa awgeed waa kuwo aad layskugu haleeyo oo aamin u ah ka ganacsiga Forex
Hillaac dhakhso leh
jawaabta hillaaca adiga
Xasiloon, Awood badan,
Laysku halayn karo
Wakhti joogto ah
u ah ganacsatada FXPRIMUS:
Adeegga ‘FXPRIMUS VPS’ waxaa si bilaash ah loogu fidinayaa macaamiisha haysta raasamaal dhan (laga jaray deynta) 500 doolar (ama u dhiganta lacag kale), kuwaas oo sameeya ugu yaraan 5 trade lots bil kasta. Macaamiisha aan buuxin shuruudahaas waxay wali kusii isticmaali doonaan Adeegga FXPRIMUS VPS fee ah 30 doolar bishiiba.
Guda Gal goobta xubnaha oo iska diwaangali hadda adeega FXPRIMUS VPS.